I-Bentley Cadasatre: Umahluko kwimephu yeBentley kunye neMephu yaMandla -Geofumadas
Ikhaya/cadastre/I-Bentley Cadasatre: iintlukwano kunye neBentley Imephu kunye neMephu yeMandla
cadastreGeospatial - GISMicrostation-Bentley
I-Bentley Cadasatre: iintlukwano kunye neBentley Imephu kunye neMephu yeMandla
Ukuqala ngeMicrostation Geographics ngo-2004, iprojekthi eyaziwa ngokuba yi-XFM yasungulwa, ekwifomathi enye ye-Dgn V8 equka amandla e-XML. Emva kwenguqulelo 8.9 eyaziwa ngokuba yiXM Bentley ukuyeka I-Geographics kwaye iqalise i-Bentley Imephu, umsi ohlukeneyo ekusingatheni idatha, nangona kunjalo lo logic operation.
Ngoku ungenakuphikiswa ukufuduka, ngenxa yoko ndenza umehluko phakathi kweenkqubo ezintathu ezikhoyo ngaphakathi komgca, ugxininisa kweli phepha cadastre, enye into enomdla kwiplasela yokulawula.
Bentley Imephu: Inguhlobo olupheleleyo, olubiza imali engaphantsi kweedola ezili-1,500 kunye nemfuneko yokuba ukuyisebenzisa "injalo" kufuna ilayisensi yeMicrostation (ngaphezulu kwe- $ 4,000). Ilungele abo banelayisensi zeMicrostation kwaye konke abakwenzayo kukuphumeza indawo ye-geospatial okanye abo bashiya iprojekthi ngesikimu seJografi.
Asinto injongo yale posi ukuze sibone ukuba yintoni eyenza Bentley Map, leyo phakathi kwezinye izinto kudala PDF 3D yaye ixhasa nabashicileli 3D, siza kubona ngenye imini; Apha ungabona ngakumbi Bentley Map
Bentley Cadastre: Lulungelelwaniso lweMephu ye-Bentley, enezinto zayo ezisebenzayo ekusetyenzisweni kwepasile, ezinye zithathwe kuGeopak Survey kunye neendlela ezintsha zobugcisa eziphunyezwe kwiXM. Ngaphantsi okanye ngaphezulu (ngaphantsi kwamanyeizixhobo ezinikezelwa yi-ESRI kulwandiso lohlalutyo lweSaveyi, (Umhleli weSaveyi, uMhleli weCadastral) kunye neCadastral Fabric. Ixabisa ngaphantsi kwe- $ 2,000 kodwa njengeMephu yeBentley, ufuna ilayisensi yeMicrostation.
Phakathi kweendlela eziqhelekileyo, kwaye ezingenayo ne-Bentley Imephu zi:
Edition COGO Ukudala idatha
-Gcina umgca ngehloko
-Gcina umgca ngokuphambuka
-Gcina i-arc engeyona i-arc
-Chawula ngoxolo -Isivumelwano seepolgoni
-Indalelo kunye nomgama
- Faka endaweni
-Kubeka ngaphaya kweenyawo
-Ukuthabatha uxolongo ukusuka kumgca
-Ukuthabatha uxolo kwiindawo
-Ukuthabatha uxolongo kwiipoloni ezingekho phantsi
-Ngenisa ingxelo kumgca
Ukukhangela Ulawulo lomhlaba
- Imephu ephezulu
-Ukwenza ifom ifayile
-Ukufaka okokufaka I-Auto-ilebula evela kwietekisi
Ukuqulunqwa kwezicwangciso ezivela kwindawo echaziweyo
-Ukucaciswa kweepakethi kwiindawo ezilinganayo
Ukungasebenzi Oko akubandakanyi i-Bentley Imephu
-Export Land XML Ngezizathu ezicacileyo ukuba ukulawulwa kweengqondo kunokuthini akubandakanyi kwiiNkonzo zoLungelelaniso:
-Phatha zonke (njengedingo)
-Kungekho kwiinkonzo zokukhangela
Apha ungabona ngaphezulu kwe-Bentley Cadastre
Imephu yeBentley Power: It is a uhlobo of version olunoqoqosho, njengoko bekuya AutoCAD lite, exakayo ubaleka phantse yonke into eyenza Bentley Map, ixabisa ngaphantsi kwe $ 1,500 kwaye udinga ilayisenisi kuba kuzisa Microstation ifakiwe. Oku kulungile kulabo abangenayo ilayisenisi ze-Microstation kwaye baya kwenza ukufumana okokuqala ngethuba okanye kwincinci encinci, isebenza ngendlela efanayo Amandla oLuntu.
Iquka yonke into eyenziwa yiBentley Imephu, ukuya kwi zempi ubuqhetseba obungenise iCadasatre, kunye neBentley Imephu, ayifaki nantoni yezinto ezimangalisayo ezibonelela ngeCadastre.
Ukungaphumeleli ngokubhekiselele kwiBentley Imephu kusendleleni yokusebenzisa iilayisenisi:
-Awukwazi ukuqhuba ezinye i zicelo njengoko ungathanda ukuba usebenza ngelayisenisi eqhelekileyo ye-Microstation, ndithetha ukuba izicelo ze-Engineering zifana Geopak, I-Inroads, uyilo lwesakhiwo (Staad / RAM), ukuyila i-hydrosanitary, i-architecture, izityalo njl.
-Also ukukhankanya ukuba awunaku kwazi ukusebenzisa isicelo yomntu wesithathu, nangona andiyiva kakuhle le umda ukuba yakhelwe phezu yesiqhelo API MicroStation okanye amandla athile alahlwa evela ezulwini lesithathu, into ke lo mpostile.
-Ngoku kulawulo lwe-3D, nangona luquka i-3 Ubukhulu bamandla, kucingwa ukuba awukwazi ukwenza iziqulatho.
Apha ungabona ngaphezulu kweMephu yeMandla.
Umasipala: ulunge iPowermap ngezizathu zexabiso.
Kwiprojekthi yeSizwe yeCadastre, iBentley Cadastre.
Kwiprojekthi enkulu eya kwenza i-GIS kungekhona nje iplasela, i-Bentley Imephu.
ukuba phumeza: Bandibiza ngokuba yi-XD
Ukususela kwi2011, Bentley Imephu V8i iquka i-Bentley Cadastre kunye neenguquko zeSicwangciso seMephu.
Ileta kubafundi bam